ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: The Voice၏ status
The Voice Weekly · 99,202 like this
‎[ Voice Of The Week ]
လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာပဲပြောပြော မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတယ်။ တောတွင်းတစ်နေရာမှာပဲ ပြောပြော၊ မြန်မာပိုင်နက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ။ တရုတ်ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်ပြီနော်။ နယ်စပ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော မြန်မာပိုင်နက် အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ။
အခုလောလောဆယ်မှာ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားဟောင်းတွေဟာ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေဘောင် အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေတယ်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုတာ ရှိခဲ့လို့ရှိရင် ပြည်ပ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ အောင်နိုင် ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ ချင်းမိုင်မှာ နေတယ်။ ဟုတ်တယ်နော်။ ကျွန်မတို့ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မှာ ရှိရမယ်။ သူ ချင်းမိုင်မှာ နေလို့ မနေလို့ဆိုတာ ထက် လူသတ်မှုတွေမှာ အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်က ချင်းမိုင်မှာ တရားဝင် နေသည်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်နေသည်ဖြစ်စေ သူဟာ လူသတ်မှုတွေမှာ အဓိက ပါဝင်နေတယ်။
ဒီတော့ သူ့ကို တရားစွဲဆို ပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။ သူ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး၊ မနိုင်ရေးက မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ယိုးဒယား အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ရမယ့် အပိုင်းလေးတွေ ရှိမှာပေါ့နော်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် Express Times သတင်းဂျာနယ်ပါ
"သွေးစွန်းတဲ့လက်တွေနဲ့ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်တာ မမြင်ချင်တော့ပါဘူး ခေါင်းစဉ်ပေးထားသော ABSDF မြောက်ပိုင်းပြန် ရဲမေဟောင်း ဒေါ်နန်းအောင်ထွေးကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း” မှ ကောက်နုတ်ချက်
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Kyawnaing Oo and 226 others like this.
Cho Yee Latt Btw, How abt 88 Student Min Ko Naing murder case?
Sunday at 10:50pm via mobile · Like · 5
Win Maw ကြားထဲ့ကြားဘူးဖတ်ဖူးတာတောင်တော်တော်ခံပြင်းပါတယ်
Sunday at 10:56pm via mobile · Like
Bait Thano ရဲမေဟောင်း ဒေါ်နန်းအောင်ထွေးကြည် တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ် အမှန်တရားဖော်ထုတ်ဖို့ သတ္တိအရမ်းရှိတယ်ဆိုရင် ထိုအချိန်ထိုအခါက တိုင်းပြည်အာဏာစက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးသန်းရွှေ နဲ့ ဦးခင်ညွှန့်လူသတ်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေကို အဓိကဖော်ထုတ်ပေးပါ့့့့  ငရဲခွေးကြီးတွေ still on the run .... this is not fair ....
Sunday at 11:06pm · Like · 11
KoBoyz KoBoyz I'm interest in Cho Yee Latt comment mentioning "88 student Min Ko Naing Murder Case".
Does she refer to currently 88 students leader Min Ko Naing ?
Sunday at 11:08pm via mobile · Like · 5
Khin Maung Nyo အဲဒါတွေဖြေရှင်းပြီးမှ စာအုပ်ဖတ်ထားသူ ပြည်သူတွေဘ၀င်းကျမယ်
Sunday at 11:10pm via mobile · Like · 1
Aung Sky Bait Thano ရဲ့ ကာယကံရှင်က ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခံစားရတာပဲ ဖော်ထုတ်ချင်မှာပေါ့...မြန်မာပြည်မှာ တကမ္ဘာလုံးမှာ လူသတ်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတာပဲ ..အမှန်တရားဆိုတာဟုတ်ပေမယ့် အကုန်လုံးတော့ ဘယ်လိုက်ဖြေရှင်းခွင့်တောင်းနိုင်ပါ့မလဲ
Sunday at 11:11pm · Like · 15
Arr Lyan ကျွန်တော်သိသော ခေတ်သစ်ဟသာင်္ံသာကိုးသောင်းပုံပြင် (မောင်မောင် ထိုစာအုပ်ရှာဖတ်ပါ။ ABSDF လူသတ်သောအကြောင်း
Sunday at 11:13pm via mobile · Like · 3
Minghui Gao I'm also interest in cho yee latt comment.Pls explain.
Sunday at 11:14pm via mobile · Like · 3
Enchanteur Sai also Samarr Nyi Nyi : escape from warewolves
Sunday at 11:25pm via mobile · Like · 2
မင်း ညို ကမ္ဘာပေါ်ကမည်သည့်နေရာတွင် မဆိုရောက်နေပါစေ ဖမ်းလို့ရပါတယ်
Sunday at 11:38pm via mobile · Like · 3
Mg Mg Zaw နောက်ကြောင်းပြန်နေရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။
Monday at 12:16am via mobile · Like
Tin Maungmaung မနန်းကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါသည်၊၊
Monday at 12:19am · Like · 4
Nyan Linn Mg Arr Lyan ပြောတာ မှန်ပါတယ်.
Monday at 12:30am via mobile · Like
Naymyo Thant ရော်နယ်အောင်နိုင်နဲ့မိုးသီးဇွန် တို့ ကို အရေးယူသင့်ပါတယ် ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးပါ
Monday at 12:32am via mobile · Like · 6
Cho Yee Latt He is one group
of Moe Thee Zun.
I heard that one old woman sue for the murder case.
But the case is still investigating.
I am also really want to know the latest update news.
Monday at 2:51am via mobile · Like
ဦး စံ တိုင်ကွယ်နေတဲ့လူသတ်သမားဖေါ်ထုတ်ကြ
Monday at 2:53am via mobile · Like · 1
Cho Yee Latt ပြီးပြီးသား အမှု မဖော်ပဲဒီတိုင်း သိမ်းလိုက်ရိုးဆို အဲဒီတိုင်းပြည် ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ပဲနပမ်းလုံးပေတော့။ ဥပဒေတွေ ပုဒ်မတွေထုတ်မနေနဲ့တော့။
လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ကြရုံပေါ့ ။ အမှုတစ်ခုက သက်တမ်းဘယ်လောက်ထိ ကြာလုို့ ရတယ် အမှုရှင်ဘက်က ပိတ်လိုချင်စိတ် ရှိမရှိပေါ်မူတည်ပြီး အမှုပိတ်ရပါတယ်။
ဆို လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ကြတော့ပေါ့။
Monday at 2:56am via mobile · Like · 2
တိုး ဝင်း ပာုတ်ပြီ အောင်နိုင် ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင် ကို အင်တာဗျူး လုပ်ပေးပါလား.. ဘာပြောလဲ ပြည်သူတွေသိချင်လို(ဘီဘီစီ လို ဖုန်းနဲ့ ဖြစ်၂ပေါ့)
Monday at 3:44am · Like · 2
Ko Lin Wai Aung ဟိုတုန်းက မှားဖမ်းမိတာတစ်ယောက်ပါရင် ကြိုးစင်ကိုရင်ကော့တက်မယ်ပြောခဲ့သူတွေက အခုတော့သတ္တိမရှိတော့ပါဘူး
Monday at 4:16am via mobile · Like · 6
Ko Zaw အရေးယူတာမယူဒါထက်နေရာမရှိဖို့လိုတယ်
Monday at 5:32am via mobile · Like
Mg Mg ဖတ်မိတော့လည်း မပြောပဲမနေနိုင်ဘူး။ဥပဒေတစ်ခုမှာ နက်နဲတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေအများကြီးပါ။ ကျနော် အဲဒီဆောင်းပါးဖတ်ပီးတော်တော်စဉ်းစားမိတယ်။နောက်တစ်ခုက တရားခံလို့ ယူဆခံရတဲ့သူတွေမှာချေပစရာ အချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။တော်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ပီး ချည်ပီးတုပ်ပီးမှရမယ်ထင်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေစုစည်းဖို့လိုပီး ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
Monday at 7:39am via mobile · Like
Shwe Sin Thet ရာဇဝတ်သားလို့ အများပြည်သူသိရှိလက်ခံထားရင် သူတို့အဖို့ အပြစ်ကျနေတာနဲ့အတူတူပါဘဲ...မနန်းတို့တာဝန်ကြေပါတယ်...မပပြန်တွေ.ပြည်တွင်း..ပြည်ပကအမှန်တရားဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသူတွေ...
Monday at 7:40am via mobile · Like · 1
Shwe Sin Thet တာဝန်ကြေပါတယ်...
Monday at 7:41am via mobile · Like · 1
Shwe Sin Thet အမှန်တရားရဲ့ ရန်သူတွေ သစ္စာဖေါက်တွေ...မလိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အဖွဲ့စွဲတွေရဲ့ အနှောက်အယှက်တွေကနေ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ.
Monday at 7:48am via mobile · Like · 2
Royal Komoe သေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်သမိုင်းအမှန်ရှိသင့်တယ်။
Monday at 7:54am via mobile · Like · 2
Yin May Mon ABSDF လူ့အရိုင်းအစိုင်းတွေကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ လက်မခံနိုင်ပါ။
Monday at 8:08am · Like
Pauline Kyi Cho Yee lattပြောတာဘာကိုလဲ၈၈ မင်းကိုနိုင်ဆိုတာေ
Monday at 10:27am via mobile · Like
Zaw Ye ကမ္ဘာ့ အရက်စက်ဆုံးကောင်တွေ နဲ့ ထိုက်တန်က သေဒဏ်ဘဲ
Min Naing Lynn လူ့အရိုင်းအစိုင်းတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ လက်မခံနိုင်ပါ၊ ကောင်းတာပေါ့။ လက်ရှိဘောင်ဘီချွတ်ထားတဲ့ သူတွေ၊ နိုင်ငံအနှံ့ရာဇ၀တ်မှုများစွာကျူးလွန်ပြီး အခုဟန်ပါပါနဲ့ အဘအခေါ်ခံနေသူတွေ ကိုလည်းမေ့မထားကြပါနဲ့။ သက်သေအထောက်အထားပေါင်းများစွာနဲ့ လွတ်မြောက်နေတဲ့ တရားခံတွေပါ၊ ရူးချင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ ဥပဒေတွေပါ။ မြောက်ပိုင်းကလူသတ်မှု အတွက် ဒေါ်နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ အမြင်ကတော့သိရပြီ။ နောက်ထပ်ရော အချက်အလက်တွေမလိုဘူးလား။ ဘယ်သူတွေက အပြစ်ကင်းကြောင်း ဘာနဲ့ သက်သေခံကြမှာလဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လူအများရှေ့ထွက်အော်ပြလိုက်ရုံနဲ့ ကျန်တာအားလုံးက တသဘောတည်း ဖြစ်သွားရောတဲ့လား။ ဥပဒေဆိုတာ မီဒီယာဖွတဲ့နောက်မှာ အာဏာပိုင်လိုသလိုကြိုးဆွဲရာ ကတဲ့အရုပ်မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 4:39 PM